Fomba fanamboarana keychain miaraka amin'ny lamba amin'ny alàlan'ny fanodinana T-shirt Asa tanana
Ahoana ny fomba hanaovana keychain miaraka amina kiran'ny t-shirt fanodinana T-shirt
Marian monleon | | Asa-tanana amin'ny lamba
Tsy haiko raha sendra anao izany, saingy tsy misy fomba hahitana azy ny keychain ao anaty kitapo, Manomboka mijery avy amin'ny lafiny iray aho, avy amin'ny lafiny iray, ary indrindra raha maika aho. Andro hafa nanamboatra lobaka ... Noheveriko ny hanao keychain miaraka amina boky kely mba hahamarihany azy rehefa mijery ny manodidina izy ary namoaka azy tamin'ny voalohany. Ka androany dia tonga niaraka tamin'ity hevitra ity aho mba hahitako raha mety aminao, tsara ho ahy izy io. Ho hitantsika eo ny fomba fanaovana keychain fanodinana t-shirt.
Kofehy sy fanjaitra.
Ho an'ity asa-tanana ity azonao atao ny manararaotra sombin'akanjo izay tsy hampiasanao. Fa raha manana kofehy ao an-trano ianao dia tsy mila manaraka ireo dingana roa ireo.
Maneteza ravina tokony ho roa santimetatra ho an'ny halavanao, raha ny amiko dia telopolo sentimetatra io.
Raiso amin'ny tananao ny faran'ny roa isaky ny kofehy ahinjiro mandra-pihodiny ary hamorona ilay lamba.
Afatory amin'ny vava vola ny tadiny telo ary manaova randrana.
Ampidiro eto ambany ny sasany kofehy dimy ho an'ny peratra ary apetraho amin'ny teboka afovoany, araka ny hita eo amin'ny sary.
Aforeto amin'ny lamba hafa eo akaikin'ny peratra ary mihodina vitsivitsy. Mba hitazonana azy dia mandalo zaitra vitsivitsy miaraka amin'ilay kofehy ary araraoty ilay fotoana ahafahana mamita azy amin'ny fametrahana bokotra.
Ampidiro izao ny vakana mba hahazoana ny sasany amin'ireo kofehy kofehy T-shirt ary afatory amin'ny fanaovana fatotra amin'ny farany.
Mamatotra knot amin'ny sombin-taratasy sisa amin'ny haavo samy hafa ary tapaho amin'ny hety izay sisa tavela amin'ny lamba.
Apetraho ny lakile ary ho vonona ny keychain ianao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa azy ho haingon-trano ao anaty kitaponao na kitapo. Fitaovana tsara ho an'ny fiandohan'ny taona, efa manamboatra azy izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » Asa-tanana sy fitaovana » Asa-tanana amin'ny lamba » Ahoana ny fomba hanaovana keychain miaraka amina kiran'ny t-shirt fanodinana T-shirt
Rosa dia hoy izy:
Keychain tena tsara sy azo ampiharina. Tiako ny hevitrao. MISAOTRA
Valiny tamin'i Rosa